Qarax ka Dhacay Laascaanood iyo Maamulka Soomaliland oo Xabsi Ka Buuxiyey Shacabka Laascaanood. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSomalilandQarax ka Dhacay Laascaanood iyo Maamulka Soomaliland oo Xabsi Ka Buuxiyey Shacabka Laascaanood.
January 13, 2021 marqaan Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 2
Ciidamada Booliska Maamulka Soomaaliland ayaa howlgallo kala duwan xalay ka sameeyay Magaalada laas-Caanood ee Xarunta Gobolka Sool, kadib markii bam gacmeed lagu weeraray goob ay ka socotay diiwaangelinta cod-bixiyaasha soomaliland.
DAAWO VIDEO Cajiib Ah:Gabadho ka Tirsan Ciidanka Danab ee Soomaaliya oo Soo Bandhigay Sheeko Dagaalka Shabaab
Reer tolkeen Dhulbahante iyo Warsangali waxaa iyaga dhexdooda, beelo ahaan, sha’nigooda kalaqubay inay kudhiirran waayeen waajibka uugu muhiimsanaa ee muddo dheer kutaagnaa: kaasoo ah soo afmeeridda aanooyinkii hore ee reero ahaan kadhex aloosnaa.
Beesha Dhulbahante aanooyiinka reero ahaan kaladilay labo ayaa ugu doorroon:
(i) aanada salka kuhaysa godobbadii lakalagalay xilligii isticmaarka ee reeraha qaar loo adeegsaday ilaalladii iyo ciidankii Ingiriis ee mujaahiddiinta Daraawiisheed lagujabinayay.
(ii) aanada iyana daxaleysatay ee salka kuhaysa loollanka ku aaddan reerka xaqa uleh xasaanadda garaadnimo ee beesha oo idil.
Inta fadeexad iyo foolxumo beesha Dhulbahante lasoodarsay labadaas aanood ayaa usabab ahaa, nasiibdarro weynna ayay kunoqotay inay beeshu yeelan wayday kartidii ay heer dhaqameed aanooyinkaas mar keli ah ugusoo afjari lahayd muddadaas aan qarniga kayarayn.
Beesha Warsangali aanooyinka reero ahaan kadhexeeya qudhoodu qarni kama sokeeyaan, laakiin ilaa heerka aanooyinka beesha Dhulbahante kaladilay magaarsiisna oo way kasahlanyihiin. Xallintooduna hawl adag ma ahaateen haddii qummaati loogu tafaxaydan lahaa oo sha’niga iyo danta guud ee beesha xaajo lagu saleeysiin lahaa oo laguna qiimeyn lahaa.
Labadan beelood oo walaalaha ah waxay muddadaas dheer kaxigeen in warmaha un la iskala ilaaliyo oo sidaas lagu kala faquuqnaado. Ciirtada dhamaa ceebtaada ogee, daldaloolladaas weeye kuwa Isaaqa qummaati ugumuuqda ee ay labadan beelood ugasoodhacaan. Isaaqu aanooyinkaasay ogyihiin sida ay reeraha labadan beelood ukaladileen oo ay si xariifnimo iyo fariidnimo lagu dheehay kagadhex kalluumeysteen.
Labadan beelood oo aynu tolka nahay, waxaan kulatalinayaa inay mar qudha khajilaan oo islayaabaan oo aanooyinkan sida ba’an ukala irdheeyay si kamadambeys ah usoo afjaraan. Ka Dhulbahante iyo Warsangali ahaan, si goonigoonidooda ah labadan beelood goggollo dhaqameed hadhigteen oo hakugarnaqsadeen oo wixii dhacay iskacafiyeen. Kadibna xaflad ballaaran oo Allabari ah hakukhatimeen.
Wixii intaas kadambeeya sha’nigooda beeleed labaduba hamideeyeen oo go’aan masiiri ah ee ay beelo ahaan ugu dhanyihiin oo kuna mideysanyihiin hakagaareen siyaasadda dalka kajirta. Dalku xilli kalaguur ah ayuu soogalay oo ay muhiim tahay inay beelaha Dhulbahante iyo Warsangali dhan uun udhacaan – ama qaddiyadda ‘Somaliland’ ama qaddiyadda Soomaaliya.
Tolweynahaoodana saxar ay beelahani dhexdhigeen ayaa kabixi lahaa oo meel baa loogusoo hagaagi lahaa oo lagunana dhaqmi lahaa. Beelahanina bahdilaadda iyo digashada ay kujiraan ayay toos ugaxoroobi lahaayeen oo ay sharaftoodu iyo sumcaddooda beeleed usoolaaban lahaayeen.
Haddii ay xataa Somaliland ugo’aanna kollay waxay kusoobixi lahaayeen beelo isku gaashaan ah ee cadkooda qummaati ugoosan kara oo aanay beelo assaaggood ahi sidii hore ugu safaadi karin.
Aarday wiilkanaa dhameeyey in sidatani wax dhaama loo baahanyay. Waa qurunimo is jiidjiidku.